> Resource > Android > Best Android Music Abaabulaha Waxaad u
Mid ka mid ah sababaha ugu weyn ee waxaan ka helay Droid ahaa ciyaaryahan ay music. Ma awoodo inuu seego wicitaanada aan jimicsiga laakiin jeclahay classic iPod. Ma doonayo inay xirtaan telefoonka iyo ciyaaryahanka waqti isku mid ah. Sidaas sida qalab cusub kasta. Markii aan ku raran aan music qaar ka mid ah heesaha oo u muuqatay in ay aad u hesho filiqsanaa ee ku saabsan iyo unorganized. Ma jiraa qalab fudud ayaan isticmaali karaa in ka dhigi doonaa in ay u fududahay in uu abaabulo aan music?
La kulmaan dhibaato ku socotid music oo dhan ee aad taleefan Android ama kiniin ah? Ha welwelin. Halkan waa qabanqaabiyaha ah ugu wanaagsan music for Android inay kaa caawiyaan inaad hesho dhibaatada wuu ka bixi ka. Taasi Wondershare MobileGo for Android . Waxaa laga heli karaa computer socda Windows OS. Sida user Mac ah, waxaad isku dayi kartaa Wondershare MobileGo for Android Pro (Mac) .
Tani qabanqaabiyaha music Android ku siinayaa awood u leeyahay inuu abaabulo music oo dhan ee aad taleefan Android ama miiska. Sidaa daraadeed, waxaad ka computer ama maktabadda Lugood in qalab Android aad, iyo qeybsanaan ku xigeenka wareejin karaan music. Ka sokow, aad awoodaan in ay magaca heeso iyo guryaha ay si toos ah uga computer ah ku eegaan.
Tilmaan ku saabsan sida loo isticmaalo this qabanqaabiyaha music Android
Waxaan dooneynaa in ay ku tusaan sida loo isticmaalo qabanqaabiyaha music ah ee Android kombiyuutarka in ay maamushaa OS Windows. Sidaas darteed, waxaan isku dayi doonaa inaan Wondershare MobileGo for Android.
Halkan, waxaan kuu soo bandhigaynaa faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan taageeray telefoonada Android iyo kiniiniyada . Waxaa Fiiri.
Tallaabada 1. Run qabanqaabiyaha music this u Android oo lagu xiro qalabka Android aad
Bilowga, rakibi oo ay maamulaan barnaamijkan on your computer. Kombiyuutarka Connect qalab Android aad la cable USB ama WiFi. Ka dib markii la ogaado, qalab Android aad lagu soo bandhigi doonaa furmo suuqa ugu weyn.
Tallaabada 2. qabanqaabiyaha Android music
Ugu khadka hoose ee suuqa ugu weyn, guji "Beddelaan & Import Music" in ay dajiyaan music ka kombiyuutarka si aad Android. Ama, "Import Lugood Library" in ay dajiyaan aad Lugood Maktabadda qalab Android aad.
Ama guji "Music" khaanadda tagay si ay u helaan suuqa kala music ah. Riix saddexagalka "Add" hoos. Markaas, waxaad ka heli 3 doorasho: "Add File", "Add Folder" iyo "music Import Lugood" in aad ku darto files music ama folder music ka your computer ama maktabadda Lugood in qalab Android aad.
Marka gabayadii laga keeno ma waxaa la ciyaari karaan qalabka Android aad, taas qabanqaabiyaha music Android kaa caawin doona inaad iyaga loogu badalo in ay Android kuwa saaxiibtinimo ee .mp3 format.
Fiiro gaar ah: Halkan, waxaad ka heli kartaa faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan wareejinta music ka Lugood qalabka Android .
Si aad u dhoofiyaan music ka Android inay computer ama maktabadda Lugood, waa inaad marka hore dooro songs in aad rabto in aad u dhoofiyaan. Guji "Dhoofinta".
Marka aad dooneyso in aad tirtirto music qalabka Android aad, waxaad riixi kartaa "Delete" ka dib dooranaya songs aan la rabin.
Si aad ku eegaan prosperities ah, aad sax karaa hees ka dibna dhigi click midig. In liiska hoos-hoos u, doortaan "properity". Markaas, aad ku eegaan karo artist, album, markii waarta, .etc.
Hadda, download this music qabanqaabiyaha si sahlan loo isticmaalo in ay isku dayaan naftaada!
Hanuunka Video ku saabsan sida loo isticmaalo this qabanqaabiyaha music Android